‘नाडा अटो सो २०१९’ शुरू, कुन कुन गाडी छन् शाे मा ? (फाेटाे फिचरसहित) - Aarthiknews
‘नाडा अटो सो २०१९’ शुरू, कुन कुन गाडी छन् शाे मा ? (फाेटाे फिचरसहित)
वारी साधनको कुम्भ मेला ‘नाडा अटो सो २०१९’ शुरू भएकाे छ । राजधानीमा बृहत् र भव्य रूपमा नाडा अटो मेला हरेक वर्ष नेपालीहरुको महान चाड वडा दसैँ र तिहारलाई लक्षित गर्दै आयोजना गरिँदै आएको नाडा अटो सो यस वर्ष यही अाजदेखि राजधानीको प्रदर्शनीमार्गस्थित भृकुटी मण्डपमा आयोजना भएकाे छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उक्त मेलाकाे उद्घाटन गरेकाे हाे । १० गतेदेखि १५ गते सम्म ६ दिन चल्ने उक्त अटो मेलामा नेपालमा उपलब्ध सानादेखि ठूला र सस्तादेखि महँगा गाडी पाइने छ । जहाँ अटो खरिदकर्ताहरुले सहज रूपमा छानी छानी र बार्गेनिङ गरीगरी सवारी साधन किन्न पाउने छन् ।
यतिखेर नाडा अटो सोको आयोजनामा कुन कम्पनीले के ल्याउँदै छ ? र कुन कम्पनीले कसरी आफ्नो प्रोडक्ट प्रदर्शन गर्दै छ रु भन्ने विषयलाई बढो कौतुहल र जिज्ञासुका साथ हेरिरहेका छन् । कुन कम्पनीले अटो सोमा आफ्नो उपस्थिति कसरी जनाउँदै छ ? र के कस्तो गाडी उतार्दै छ ?
‘नाडा अटो सो २०१९’ मा कसले के प्रदर्शन गर्दै छन् ?
मूलतः एस–क्रस १।३ डिजेल इन्जिनयुक्त हाइब्रिड प्रिमियम कार हो । यसलाई आरामदायी र फेमिलियर कारका रूपमा लिन सकिन्छ । ५ सिट क्षमतामा उपलब्ध यो कार लामो यात्राका लागि समेत निकै आरामदायी छ । त्यसो त कार हाइब्रिड भएकैले इन्धन बचतमा समेत अब्बल मानिएको छ । एस–क्रसले सरदर प्रतिलिटर २५।१ किलोमिटरसम्मको उच्च माइलेज दिन्छ । जुन यही सेग्मेन्टको अन्य कारहरुले दिँदैन ।
एक्सयूभी ३०० मा ७ वटा फस्टइन सेग्मेन्ट फिचर दिइएको छ । सातवटा एयरब्याग, चारै चक्कामा डिस्क–ब्रेक, १७ इन्च अलोय–ह्विल, ईबीडी तथा एबीएसजस्ता अत्याधुनिक फिचर्सहरुले एसयूभी–३०० विशेष बनेको छ । एसयूभी–३०० १।२ लिटर टर्बो पेट्रोल र १।५ लिटर डिजेल इन्जिनमा उपलब्ध रहेको छ ।
महिन्द्रा मराजोमा १।५ लिटरमा ४ सिलिन्डर डिजेल इन्जिनमा आएको छ ।
टाटा मोटर्सले नाडा अटो सोको अवसर पारेर अहिलेसम्मकै अत्याधुनिक एवं सुविधासम्पन्न एसयूभी कार ह्यारिअर भित्र्याउने भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ह्यारिअर नामले परिचित यो कार नेपालमा भने ‘एच फाइभ’ नाममा आउने भएको छ । यो नै टाटाको यस वर्षको नाडा अटो सो विशेष कार हुने पक्का पक्की जस्तै भएको छ ।
ह्यारिअरमा ईएसपीमा आधारित टेरेन रेस्पोन्स मोड उपलब्ध छ, जसका कारण जस्तोसुकै सडकमा पनि सहज तरिकाले चलाउन सकिन्छ । कारको क्याबिनमा ८।८ इनचको फ्लोटिङ टचस्क्रिन इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम छ । त्यसैगरी ८–वे एड्जस्टेबल ड्राइभर सिट, लेदर अप होल्स्ट्री, क्लाइमेट कन्ट्रोल, ओआरभीएम आदि उपलब्ध छ ।
टाटा ह्यारिअरमा २।० लिटरको फोर सिलिन्डर क्र्याओटेक टर्बो डिजेल इन्जिनमा उपलब्ध छ ।
एक्सएलटी फोर्डको पिकअप सेग्मेन्टको कार हो । यो कारलाई नै फोर्डले यस पटकको नाडा अटो सोमा विशेष कारका रूपमा प्रदर्शन गर्ने भएको छ । एक्सएलटी अटोमेटिक २।३ एल टीआई–भीसीटी आई–फो इन्जिनमा उपलब्ध हुनेछ । यो कार फो ह्विल ड्राइभमा उपलब्ध हुनुका साथै अफ रोड विशेष कारका रूपमा स्थापित हुने देखिन्छ । कम्पनीले नाडा अटो सोमा यो कार विशेष हुने अपेक्षा गरेको छ ।
निसानले यस वर्ष टप भेरियन्टमा ‘किक्स’लाई नाडामा उतार्ने भएको छ । बजारमा केही समयअघि नै आइसके पनि यस पटक किक्सको टप भेरियन्ट आउने भएको हो । यो कार टप प्रिमियम अप्सनको कार हो । जुन फो के रियर क्यामेरासहित फो एयर ब्यागमा आउने छ । १४ सय ६१ सीसी इन्जिन क्षमतामा आउने यो कार डिजेल र पेट्रोल दुवै अपसनामा आउने कम्पनीले जनाएको छ । अन्यमा पहिलेकै र बजारमा आइसकेका प्रोडक्टहरु नै नाडा अटो सोमा प्रदर्शन गरिने कम्पनी जनाएको छ ।